တာလီဘန်ခေါင်းဆောင်တွေ သမ္မတနန်းတော်မှာ အကြီးအကျယ် ငြင်းခုံ စကားတွေများကြ - ข่าวสด
တာလီဘန်ခေါင်းဆောင်တွေ သမ္မတနန်းတော်မှာ အကြီးအကျယ်...
တာလီဘန်ခေါင်းဆောင်တွေ သမ္မတနန်းတော်မှာ အကြီးအကျယ် ငြင်းခုံ စကားတွေများကြ
15 ก.ย. 2564 - 20:30 น.
အမေရိကန်တပ်တွေ ဆုတ်ခွာမယ်ဆိုတဲ့ ဒိုဟာ သဘောတူညီချက်ကို တာလီဘန်ကိုယ်စား မူလာ အဗ္ဗဒူ ဂါနီ ဘာရဒါက လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့
အာဖဂန်နစ္စတန်မှာ အစိုးရသစ်ဖွဲ့လိုက်ပြီး ရက်ပိုင်းအကြာမှာပဲ တာလီဘန်ခေါင်းဆောင်တွေ အကြား အကြီးအကျယ်အငြင်းအခုံတွေဖြစ်ခဲ့ကြတယ်လို့ တာလီဘန် ထိပ်တန်းအရာရှိ တချို့က ဘီဘီစီကို ပြောပါတယ်။
รวมหวยเด็ด เลขนายกฯ-เลขครบรอบมิตร แม่น้ำหนึ่ง-เปิดเลขเด่นมาแรง
'เต้ พระราม 7' ถึง 'บาส มีดคู่' ลั่นเห็นใจ เป็นพี่ก็ต้องสู้6รุม 1 ไม่สู้ก็ตาย พร้อมเคียงข้าง
ช่างทาสีเปิดใจ! เห็นจะจะโดนตัดเชือก-กลัวมาก ตร.รู้ตัวมือตัดแล้ว จ่อเรียกแจ้งข้อหา
မြို့တော် ကာဘူးလ်က သမ္မတနန်းတော်ထဲမှာ တာလီဘန် စင်ပြိုင်အုပ်စုတွေအကြား တွန်းထိုးတိုက်ခိုက်ကြတဲ့အထိ ဖြစ်ခဲ့ကြတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
အမေရိကန်ကို အောင်နိုင်အောင် ဘယ်သူက အဓိကလုပ်ခဲ့သလဲဆိုတဲ့အပေါ် ဦးတည် ငြင်းခုံခဲ့ကြသလို ၊ အစိုးရသစ်မှာ အာဏာကို ဘယ်လိုခွဲဝေယူကြမလဲ ဆိုတဲ့အပေါ်မှာလည်း သူတို့ အငြင်းပွားခဲ့ကြတယ်လို့ သိရပါတယ်။
တာလီဘန်ရဲ့ တရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်ရေးဘက်ကတော့ ဒီသတင်းတွေကို ပယ်ချထား ပါတယ်။
တာလီဘန်အဖွဲ့ဟာ အာဖဂန်နစ္စတန်ကို ပြီးခဲ့တဲ့လအတွင်းက သိမ်းပိုက်ထားခဲ့ပြီး နိုင်ငံကို "အစ္စလာမ်မစ်နိုင်ငံ"တစ်ခုအဖြစ် ကြေညာထားပါတယ်။ ကြားဖြတ်အစိုးရသစ်ကို အမျိုးသားတွေနဲ့ သာဖွဲ့စည်းထားပြီး ထိပ်တန်း တာလီဘန်ခေါင်းဆောင်တွေပါဝင်ပါတယ်။ အဲဒီတာလီဘန်ခေါင်းဆောင်တွေထဲက တချို့ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ဆယ်စုနှစ် ၂စုတာ ကာလအတွင်း အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေကို အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့် နာမည်ဆိုးတွေနဲ့ ကျော်ကြားခဲ့တဲ့ သူတွေပါ။
အာဖဂန် အာဏာလွှဲပြောင်းမှု ရက်ပိုင်းအတွင်း ပြီးစီးနိုင်တယ်လို့ တာလီဘန်ပြော
တာလီဘန်တွေ အချိန်တိုအတွင်း နယ်မြေတွေ ဘယ်လို သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့သလဲ
တာလီဘန် ပူးတွဲ တည်ထောင်သူ တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ မူလာ အဗ္ဗဒူ ဂါနီ ဘာရဒါ တယောက် ရက်ပေါင်းအတော်ကြာ အများမြင်ကွင်းကနေ ပျောက်ကွယ်နေပြီးတဲ့နောက် ဒီအငြင်းပွားတဲ့ အဖြစ်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာ ပေါ်လာပါတယ်။
မစ္စတာ ဘာရဒါနဲ့ ဒုက္ခသည်ရေးရာ ဝန်ကြီးလည်းဖြစ်၊ ဟာကာနီ ကွန်ရက်က ထင်ရှားတဲ့ ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်လည်းဖြစ်တဲ့ ခါလစ် အာ ရာမန် ဟာကာနီ တို့အကြား ပြင်းထန်တဲ့ စကားလုံးတွေ သုံးပြီး စကားများကြသလို၊ သူ့တို့ရဲ့ နောက်လိုက်တွေလည်း တစ်ဖက်နဲ့ တစ်ဖက် တွန်းထိုးပြီး ရန်ပွဲဖြစ်ကြတယ်လို့ တာလီဘန်သတင်းရင်းမြစ်တစ်ခုက ဘီဘီစီ ပက်ရှ်တူ သတင်းဌာနကို ပြောပါတယ်။
ကာတာမှာရှိတဲ့ ထိပ်တန်းတာလီဘန်အရာရှိတစ်ယောက်ကရော၊ ၂ အုပ်စု ချကြတဲ့ပွဲမှာ ပါဝင်ခဲ့ကြသူတွေနဲ့ အဆက်အသွယ်ရှိတဲ့ လူတစ်ယောက်ကရော အဲဒီ အငြင်းပွားတာက ပြီးခဲ့တဲ့ သီတင်းပတ် နှောင်းပိုင်းမှာ ဖြစ်ခဲ့တာလို့ အတည်ပြုပြောပါတယ်။
အစိုးရသစ်ရဲ့ ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ် မစ္စတာ ဘာရဒါက ကြားဖြတ်အစိုးရ ဖွဲ့စည်းထားပုံကို မကြိုက်တဲ့အပေါ် အခြေခံပြီး အငြင်းအခုံတွေ စဖြစ်ကြတာလို့ သတင်းရင်းမြစ်တွေက ပြောပါတယ်။
အာဖဂန်အောင်ပွဲအတွက် တာလီဘန်ထဲမှာရှိတဲ့ ဘယ်သူက ဘယ်လောက် အခန်းကဏ္ဍကနေ ပါခဲ့ သလဲဆိုတဲ့အပေါ် ကွဲပြားမှုကနေ ထချကုန်ကြတဲ့အထိ ဖြစ်လာပုံပါ။
မစ္စတာ ဘာရဒါက သူ လုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ သံရေးတမန်ရေးကိစ္စတွေကို ပိုအလေးအမြတ် ထားသင့်တယ်လို့ ယုံကြည်ပုံရပါတယ်၊ ဟာကာနီအုပ်စုနဲ့ သူ့နောက်ပါတွေကတော့ တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့် အောင်ပွဲကိုရခဲ့တယ်လို့ ပြောကြပါတယ်။
၂၀၂၀ ခုနှစ်အတွင်း ဒေါ်နယ်ထရမ့်နဲ့ ဖုန်းကတစ်ဆင့် စကားပြောခဲ့ကြတဲ့ မစ္စတာ ဘာရဒါဟာ အမေရိကန်သမ္မတတစ်ယောက်ကို တိုက်ရိုက် ဆက်သွယ်ခွင့်ရခဲ့တဲ့ ပထမဆုံးသော တာလီဘန် ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ခဲ့တာပါ။ အဲဒီမတိုင်ခင်မှာ အမေရိကန်တပ်တွေ အာဖဂန်နစ္စတန်က ဆုတ်ခွာမယ်ဆိုတဲ့ ဒိုဟာ သဘောတူညီချက်ကို တာလီဘန်တွေကိုယ်စား သူက လက်မှတ် ထိုးခဲ့ပါတယ်။
တစ်ဖက်မှာလည်း အင်အားကောင်းတဲ့ ဟာကာနီ ကွန်ရက်ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်ပိုင်းတွေအတွင်း အာဖဂန်အစိုးရတပ်တွေနဲ့ သူ့ရဲ့ အနောက်အုပ်စု မဟာမိတ်တွေကို အပြင်းအထန် အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။ အမေရိကန်က ဒီကွန်ရက်ကို အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းအဖြစ် သတ်မှတ် ထားပါတယ်။
ဟာကာနီ ကွန်ရက်ခေါင်းဆောင် ဆီရာဂျူဒင် ဟာကာနီက ကြားဖြတ်အစိုးရသစ်မှာ ပြည်ထဲရေး ဝန်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။
တာလီဘန်ထဲမှာ တွေ့ရမြင်ရတာ အများဆုံး ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့ မစ္စတာ ဘာရဒါ တယောက် အများမြင်ကွင်းကနေ ပျောက်ကွယ်နေတဲ့နောက် ဒီ အကွဲအပြဲရဲ့ နောက်ဆက်တွဲ ကောလာဟလ ပျံ့ခဲ့ပါတယ်။ လူမှုမီဒီယာတွေမှာ သူသေသွားပြီဆိုတဲ့ အထိ မှန်းရေး နေကြတာပါ။
မစ္စတာဘာရဒါဟာ အဲဒီပွဲပြီးတဲ့နောက် ကာဘူးလ်မြို့ကထွက်ခွာပြီး ကန်ဒဟာမြို့ကို ထွက်သွားတယ်လို့ တာလီဘန် သတင်းရင်းမြစ်တွေက ဘီဘီစီကို ပြောပါတယ်။
တနင်္လာနေ့က မစ္စတာ ဘာရဒါ ပြောတာကို ဖမ်းယူထားတာဆိုတဲ့ အသံဖိုင်တစ်ခု ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီး အဲဒီထဲမှာ သူက သူ "ခရီးတွေသွားနေတယ်"လို့ ပြောတာပါသလို၊
သူ "ဒီအချိန်ကာလမှာ ဘယ်နေရာမှာပဲရှိရှိ၊ ကျွန်တော်တို့ အားလုံး အဆင်ပြေပါတယ်"လို့ ပြောထားပါတယ်။
ဒီအသံသွင်းထားတဲ့ ဖိုင်ထဲက အသံက ကာယကံရှင်ရဲ့ အသံအစစ်အမှန်ဟုတ်၊ မဟုတ်ဆိုတာကို ဘီဘီစီက အတည်မပြုနိုင်ပါဘူး၊ တာလီဘန်တွေရဲ့ တရားဝင် ဝက်ဆိုက်အတော်များများမှာ ဒီဖိုင်ကို တင်ထားတာတော့ တွေ့ရပါတယ်။
အဲဒီအငြင်းပွားတာတွေ မဖြစ်ခဲ့ပါဘူး၊ မစ္စတာ ဘာရဒါဟာ လုံခြုံစိတ်ချရတဲ့နေရာမှာ ရှိနေတယ်လို့ တာလီဘန်က ထပ်မံပြောနေပေမယ့်၊ သူလက်ရှိဘာတွေ လုပ်နေလဲ ဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်လို့တော့ ပြောတာတွေက တစ်ခုနဲ့ တစ်ခုကွဲလွဲတာတွေ ဖြစ်နေပါတယ်။ တာလီဘန် ပြောခွင့်ရသူတစ်ယောက်က မစ္စတာ ဘာရဒါဟာ ကန်ဒါဟာကို ခရီးထွက်သွားပြီး အဲဒီမှာ တာလီဘန်ရဲ့ အာဏာအမြင့်ဆုံး ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ သွားတွေ့မှာလို့ ဆိုပေမဲ့ နောက်ပိုင်းမှာတော့ ဘီဘီစီ ပက်ရှ်တူ ဘာသာဌာနကို သူက ပြောရာမှာတော့ မစ္စတာ ဘရာဒါဟာ "ပင်ပန်းလို့ အနားယူနေတာ"လို့ ပြောပါတယ်။
တာလီဘန်တွေပြောတာကို အာဖဂန်ပြည်သူအများအပြားက သံသယရှိတယ်ဆိုတာကလည်း အရင်ကဖြစ်ခဲ့ဖူးတဲ့အဖြစ်တွေအပေါ် မူတည်ပါတယ်။ သူတို့အဖွဲ့ကို တည်ထောင်သူ ခေါင်းဆောင် မူလာ အိုမာ သေဆုံးပြီဆိုတာကို သတင်းမထုတ်ဘဲ အချိန်ကာလ ၂ နှစ်ကျော် ဖုံးကွယ်ခဲ့တာကို ၂၀၁၅ တုန်းက သူတို့ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်၊ ဖုံးကွယ်ထားတဲ့ ကာလမှာ အဲဒီခေါင်းဆောင်က ထုတ်ပြန်တယ်ဆိုတဲ့ သဘောထားကြေညာချက်တွေကို သူတို့ ဆက်ပြီး ထုတ်နေခဲ့တာပါ။
မစ္စတာ ဘာရဒါဟာ ကာဘူးလ်ကို ပြန်လာကာ၊ ဘာအငြင်းပွားတာမှ ဖြစ်ခဲ့တာမျိုးမရှိဘူးလို့ ပြောဖို့ အတွက် ကင်မရာတွေရှေ့ကို ထွက်လာလိမ့်မယ်လို့လည်း မှန်းဆနေကြတဲ့အကြောင်း သတင်းရင်းမြစ်တွေက ဘီဘီစီကို ပြောပါတယ်။
လူမြင်ကွင်းမှာ တစ်ခါမှာ ပေါ်မလာဘူးသေးတဲ့ တာလီဘန်တို့ရဲ့ အထွတ်အထိပ်ခေါင်းဆောင်ကြီး ဟီဘက်တူလာ အက်ခွန်ဇားဒါ နဲ့ပတ်သက်လို့လည်း ခန့်မှန်းပြောဆိုတာတွေထွက်နေပါတယ်။ သူက တာလီဘန်တို့ရဲ့ နိုင်ငံရေး၊ စစ်ရေး၊ ဘာသာရေးဆိုင်ရာတွေမှာ အာဏာအမြင့်ဆုံးပါ။
ဒီကာလမှာပဲ အာဖဂန်ရဲ့ ယာယီ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးက နိုင်ငံတကာအနေနဲ့ အကူအညီတွေကို နိုင်ငံရေးနဲ့မနွယ်စေဘဲ ပြန်ပြီး စတင်ကာ ပေးကြဖို့ တောင်းဆိုထားပါတယ်။
ကုလသမဂ္ဂက အာဖဂန်နစ္စတန်မှာ "ကပ်ဘေးဒုက္ခကြီးတွေ ဆိုက်ဖို့ အရိပ်အယောင် တွေပြနေပြီ"လို့ သတိပေးထားပြီးတဲ့နောက် နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းက အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁ ဘီလီယံကျော် အာဖဂန်ကို ထောက်ပံ့မယ်လို့ တနင်္လာနေ့က ကတိပေးထားပါတယ်။
แห่อาลัย "พรศักดิ์ ส่องแสง" หัวใจวายเฉียบพลัน ช็อกวงการเพลงลูกทุ่งหมอลำ
เปิดประวัติ พรศักดิ์ ส่องแสง เคยประชันคอนเสิร์ต "พี่เบิร์ด" ก่อนปิดตำนานด้วยวัย 60 ปี
หาดูยาก ประตูห้องหลบภัยเก่าแก่ คนยุคก่อน ทำไว้ป้องกันโจร-สัตว์ร้าย
'ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์' เปิดจอง 'โมดอร์นา' เข็มละ 555 บาท 29 ต.ค.นี้ เผยข้อกำหนดการจอง
โค้งสุดท้าย "เลขเด็ด" อ่างน้ำมนต์พญามังกร “เจ้าสัว สำเภาทอง” เห็นเน้นๆ2ตัว3ตัว
อัลบั้มภาพ တာလီဘန်ခေါင်းဆောင်တွေ သမ္မတနန်းတော်မှာ အကြီးအကျယ် ငြင်းခုံ စကားတွေများကြ